Mifankatia amina lehilahy manambady? Fahamarinana 13 mila renao. - Fifandraisana
Mifankatia amina lehilahy manambady? Fahamarinana 13 mila renao.
Raha tia lehilahy manambady ianao dia mety mahatsapa fihetseham-po mifanohitra be izao.
tononkira hira anao
Indraindray, tsy vitanao ny tsy hahatsapa fifaliana sambatra, satria raiki-pitia ianao.
Fa avy eo dia niverina nianjera tamin'ny zava-misy ianao ary mahatadidy fa nanambady izy, ary toe-javatra tena sarotra tokoa.
Ary vao mainka mahasosotra anao ny hoe tsy nametraka mihitsy ianao hihaona na ho tia olona efa manambady.
Vao nahita ny tenanao tamin'ity toe-javatra ity ianao, ary ankehitriny dia tsy fantatrao izay hatao.
Mazava ho azy fa tsy misy fifandraisana misy eo amin'ny olona roa izay mitovy amin'ny an'ny hafa.
Ny fifandraisana misy an'ity lehilahy ity sy ny fifandraisany amin'ny vadiny dia samy tsy manam-paharoa, ary sarotra ho an'ny olona ety ivelany ny mahatakatra, ka sarotra ny manome torohevitra mahazatra amin'ny toe-javatra toy ireny.
Saingy misy fahamarinana sarotra vitsivitsy izay mety mila renao, na inona na inona toe-javatra iainanao.
Rehefa dinihina tokoa, ny toe-javatra misy anao ankehitriny dia tsy maharitra. Mihevitra aho fa afaka mifanaraka amin'izany isika rehetra.
Ary raha mamaky an'ity ianao dia mitady valiny.
Angamba nomenao ny torohevitra tsara rehetra nataon'ny namanao sy ny fianakavianao (raha nolazainao azy ireo izany), saingy mety ho mora kokoa indraindray ny mandre ireo zavatra ireo amin'ny olon-tsy fantatra noho ny olona akaiky anao.
Misy zavatra tsy maintsy ovaina, ary tsy ho mora ny mandeha.
Henoy, faritra tsy misy fitsarana ity - tsy nihevitra ny ho raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady ianao, fa tsy afaka mifehy ny fonay izahay. Ka izay manaraka dia tsy natao hahakivy anao amin'ny zava-nitranga, na dia namely mafy aza indraindray.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, eto ny torohevitray momba ny fomba ahafahanao mandray andraikitra tsara ary mandroso amin'ny fiainanao.
1. Mila mandinika ianao raha tena afaka matoky azy.
Raha misy lehilahy manambady tokana manambady manao raharaha dia tsy azo ihodivirana ny lainga be dia be, ka efa fantatrao fa mahay mamitaka izy.
Nanitatra anao ve izany lainga izany? Fantatrao ve fa nanambady izy hatramin'ny fotoana nifanenanao taminy, na nandainga taminao izy momba izany?
Ny zava-misy mandainga amin'ny vadiny dia saina mena, fa raha manandrana misintona volonondry eo ambonin'ny masonao izy dia tokony hanaiky ianao fa tena azo itokisana .
Raha handao ny vadiny ho anao izy, dia tsy manana antoka ianao fa tsy hanao zavatra mitovy aminao izy taona vitsivitsy any ambany.
2. Mety tsy ianao no voalohany.
Raha toa tsy manana tena fikasana hamela ny vadiny ho anao izy, dia mety tsy ianao no ‘vehivavy hafa’ voalohany.
Na koa ny vehivavy tokana, na dia mety misy fahaiza-manao matotra eo amin'ny fandaminana aza izany. Rehefa dinihina tokoa, mafy dia mafy manenjika fifandraisana roa ao anatin'ny herinandro.
Na manao ahoana na manao ahoana ny mampiavaka anao ny fahatsapany na ny fitiavany an'ity lehilahy manambady ity, dia tsy ho fantatrao mihitsy raha iray amin'ny andalana lava ianao.
3. Tsy tokony hipetraka eo am-piandrasana ianao.
Eritrereto aloha ny fifandraisanao amin'ity lehilahy ity. Tsy hampaninona ahy ny filokana fa misy ifandraisany be dia be ianao miandry azy.
Mpanefy vy ve i trey smith?
Mijanona ao ianao, sao sanatria mandefa SMS izy milaza hoe nahavita nitsoaka. Miandry azy ianao rehefa tara amin'ny daty izy satria tsy nahita fialantsiny hiala.
Mamono ny fotoananao lavitra ianao miandry azy hiantso, rehefa afaka any ianao mipetraka.
4. Tsy ianao no laharam-pahamehany voalohany.
Tsy maninona na dia manandrana mandresy lahatra anao aza izy raha tsy izany, raha ianao no vehivavy hafa dia tsy ianao no voalohany amin'ny lisitra laharam-pahamehany. Ny vadiny dia, ary, raha manan-janaka izy ireo dia maty.
5. Ny fomba firesahany momba ny vadiny dia afaka milaza betsaka aminao.
Manaja ve izy rehefa miresaka momba ny vadiny? Raha tsy izany, ahoana no hinoanao fa manaja anao tokoa izy?
6. Mety tsy handao ny vadiny izy.
Vitsy dia vitsy ny lehilahy manambady tena mamela ny vadiny ho an'ny olon-tiany, ary ny vintana dia tsy ianao no maningana manaporofo ny lalàna.
Raharaha lehibe tokoa ny fisaraham-panambadiana, ary misy zavatra maro hitazomana azy ao anaty fanambadiana, na dia tsy faly aza izy milaza azy ho ao.
Aza mino ny teniny, raha ny fihetsiny no tena manisa eto. Rehefa raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady ianao dia mety ho sarotra tadidy izany - fa tsy maintsy.
7. Mety mankafy ny fientanentanana an'io ianao, kely fotsiny.
Mety ho sarotra ny hanaiky ny tenanao, fa fifandraisana mampidi-doza ity, ary mety ho vetaveta tsara izany.
Mila miaiky ianao fa mety misy ampahany aminao izay manala ny hevitra hoe manao raharaha. Ary azo antoka fa izany no izy.
Mety tsy marina aminao izany, fa raha izany dia tadidio fa raha handao ny vadiny izy dia hiala izany risika rehetra izany.
Ny fiarahanareo dia azo inoana fa hiova mihoatra ny fantatry ny rehetra, ary mila miatrika ireo fanamby ianao amin'ny fihoarany ny fisaraham-panambadiana.
Hanomboka hiaina ny fiainana andavan'andro tampoka ianao, fa tsy hisambotra fotoam-pitiavana fotsiny, ary tampoka dia toa tsy dia nahasarika loatra izy.
8. Raha misy ankizy tafiditra ao dia milalao afo ianao.
Raha ny lehilahy manambady tianao dia manan-janaka amin'ny vadiny, dia tafiditra amin'ny toe-javatra sarotra tsy mampino ianao.
Raha avelany ho anao ny vadiny, dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fifandraisany amin'ny zanany izany.
Raha fantatr'izy ireo fa navelan'ny dadany ho anao ny rainy, dia mety tsy hanafana anao izy ireo, izay mety hiteraka disadisa matotra eo aminao sy izy.
9. Ny olana ara-panambadiana dia tsy miankina aminy rehetra.
Azo antoka fa mety nanambady olona izay nahafaty azy fotsiny izy Ilana . Fa raha tsy izany dia tsy miankina aminy daholo ny olana ao amin'ny fanambadiany.
Mety manana olana izy, na fomba iray hanarahana fifandraisana matotra izay mety hiteraka olana eo aminareo roa tonta koa.
Aza adino ny tenanao fa tsy hitovy aminao izany.
10. Vonjimaika ianao.
Sarotra ny hanaiky an'io, fa na toy inona na toy inona ny fitiavany anao ankehitriny sy ny fahitana azy toa ny fitiavany anao dia fotoana fohy fotsiny ianao vao manomboka manjary sarotra, ary leo anao izy.
mahatsapa ho lehilahy ve ianao?
Ny mangalatra fotoana hiarahana dia mampihetsi-po hanombohana azy, saingy vetivety dia lasa sarotra izany.
Ny raharaha iray dia mandany fotoana sy nofy ratsy amin'ny logistika, ary raha vantany vao lany ny fientanam-po amin'ny dingana voalohany eo amin'ny fifandraisanareo dia ho reraka izy tsy ho ela.
Fomba 3 handrosoana amin'ny raharaha
Azoko antoka fa ny sasany tamin'izy ireo dia sarotra vakiana, saingy angamba mila mihaino azy ianao.
Ary ankehitriny, mila mijery ny ho avy ianao ary mamantatra izay hataonao.
Na dia mety mifankatia amina lehilahy manambady aza ianao izao, dia misy fomba tsy ivoahana amin'ity toe-javatra ity.
1. Atsipazo izy.
Fantatro, fantatro. Ity dia fomba tsotra indrindra, ary azoko antoka fa efa henonao an-tapitrisany izany, indrindra amin'ireo namanao akaiky indrindra sy ny olona rehetra izay tia anao… raha efa nilaza tamin'izy ireo akory ianao.
Saingy mila mandinika tsara ianao raha manome anao zavatra tsara rehetra ity fifandraisana ity, na fotoana tokony hanapahana tanteraka ny tadiny.
Ambonin'izany rehetra izany, manehoa hatsaram-panahy amin'ny tenanao, ary alao antoka fa miaiky ianao rehefa manomboka manimba anao ny fiarahana amin'ny lehilahy manambady.
2. mampiaraka amin'ny lehilahy hafa.
Raha tsy afaka mitondra tena hisaraka aminy ianao dia sokafy farafaharatsiny ny safidinao.
Mandehana miaraka amin'ny lehilahy hafa. Milalao miaraka amin'ilay bandy mafana any am-piasana. Manandrama mampiaraka amin'ny Internet. Malalaka tanteraka ianao mahita olon-kafa.
Rehefa dinihina tokoa, ianareo roa dia tsy manokana. Mbola matory amin'ny vadiny izy, na inona na inona angatahiny.
Ny fahitana bandy hafa dia afaka mampahatsiahy anao fa betsaka ny trondro ao anaty ranomasina, ka rehefa vita izany, saika tsy azo ihodivirana, dia tsy hitomany ao anaty gilasy ianao, resy lahatra fa tsy hahita olon-kafa mihitsy.
3. Atsaharo ny raharaha.
Raha nilaza taminao ity lehilahy manambady ity fa hamela ny vadiny ho anao izy, dia tsara izany. Gaga aho raha tena misy izany, fa hey, iza aho no hitsara ny toe-javatra misy anao manokana.
Fa aza mahita azy foana ary matory miaraka aminy mandritra izany fotoana izany, raha mbola mitady fialan-tsiny tsy hanatanterahana azy anio, amin'ity herinandro ity, amin'ity volana ity, na amin'ity taona ity aza izy.
Lazao azy fa tsy mieritreritra ianao fa tokony hifankahita am-pitiavana mandra-pahatapitry ny raharaha ny vadiny.
Tsy ho ela dia ho hazava raha tena manana fikasana hiala izy, na efa tonga ny fotoana tokony handrosoanao.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao amin'ny fahatsapanao sy / na ny fifandraisanao amin'ity lehilahy manambady ity?Tsy toe-javatra mora idirana izany ary mety ho vao mainka sarotra kokoa raha tsy manana olona hiresahana ianao. Na dia manao izany aza ianao, dia mety tsy miandany amin'olona. Eo no ahafahan'ny mpanolo-tsaina ny fifandraisana miditra ary ho sofina hihaino anao sy ny feo hanome torohevitra voadinika tsara.Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahafantatra izay hitranga amin'ny ho avy amin'ny fiarahanareo. Tsotra.
Mety tianao ihany koa ny:
10 Tsy Misy Bullsh * t Antony mahatonga ny vehivavy handao ny lehilahy tian'izy ireo
Inona no atao hoe famitahana atao amin'ny fifandraisana?
Ahoana no fomba hanajan'ny lehilahy anao: tsy misy toro-hevitra tsy misy fotony 11!
Ny fomba famitahana ataon'ny mpampihorohoro
Fifandraisan-doha: Ny famantarana tokony hotandremana
Fa maninona ny olona no manambady? 15 Antony tsara sy ratsy amin'ny fanambadiana!
ny fomba tsy fampahasaro-piaro teo amin'ny fifandraisana
mpivady fa ny fitiavana amin'ny lehilahy hafa Quotes
inona no tadiavin'ny lehilahy amin'ny vady
maka aina kely avy amin'ny fifandraisana rehefa miara-miaina
ny fomba hilaza raha misy fifandraisana dia nampihetsi-po mafy loatra
misy teboka ve ny fiainana